देश टुक्राउने नेतालाई सजाय फाँसी नै हो’ ~ FMS News Info
देश टुक्राउने नेतालाई सजाय फाँसी नै हो’
लामो समयदेखि यहाँहरु हिन्दुराष्ट्रको माग गर्दे आउनु भएको छ तर हिन्दुराष्ट नहुँने छाँट देखियो नी ?
हामी नेपाली हौ । हाम्रो धर्म र संस्कार छुट्टै छ । जस्तो हामी नेपालीको संस्कार छ, त्यही प्रकारको विधि र ब्यक्तिको स्वार्थका लागि हामीले यो माग गरेका
कानुन निर्माण गर्नु राज्य संचालकको दायित्व हुन्छ । नेपाली समाजको चरित्र हिन्दुधर्म ग्रन्थमा आधारित छ । तर दुर्भाग्य आज त्यही चरित्रको हत्या गरिदैछ । नेपाल सदियौ देखि हिन्दु दर्शनबाट चलेको छ । रिति रिवाज यस्तै छ । नेपाल एउटा स्वर्गभूमी हो । नेपाली समाजको चरित्र नै हिन्दुधर्मसँग गाँसिएको हुनाले शिवसेना नेपालले हिन्दु राष्ट्रको माग गरेको हो । हामी नेपालबाट विश्वलाई शान्तिको मार्गमा हिडाउने प्रयत्नमा छौ ।
होइनौ । दिर्घकालिनरुपमा नेपालीको हित होस भन्ने हाम्रो चाहाना हो । तर यहाँका राज्य सञ्चालकहरु केही विदेशीको स्वार्थमा हिडेर हिन्दु संस्कार नष्ट गर्ने प्रयत्नमा छन् । एउटा सानो कुरा माओवादीले १३ हजार मान्छे मारेर सत्तामा आयो । यदि हिन्दु राष्ट्रका लागि हामीले आन्दोलन र हतियारको आडमा लड्ने हो भने कति विनाश हुन्छ त्यसको आकलन अहिलेका राज्य सञ्चालन गरिरहेका दलहरुले सोच्न पनि सक्दैनन् ।
अब के गर्नु हुन्छ यहाँहरुले ?
हिन्दु राष्ट्र अब शिवसेना नेपालको मात्र मुद्दा रहेन । ९० प्रतिसत भन्दा बढि नेपालीको साझा मुद्दा भइसकेको छ । नेपालीको मागलाई यदि बेवास्था गर्ने हो भने हामी चुप लागेर बस्दैनौ । अहिले देश चलाइरहेकाहरुलाई ठुलो घातक हुन सक्छ । जनताको चाहाना कदर नगरे त्यसको परिणाम भोग्न दलका नेताहरु तयार रहन म चेतावनी दिन चाहान्छु । तर हाम्रो काम र कर्तब्य विनाश होइन ।
राज्य सञ्चालकका गतिविधि नेपालीको हितमा हुनु पर्दथ्यो । हाम्रो शक्तिपनि नेपालीकै हितमा छ । हामीले अहिले धैर्य गरिरहेका छौ । अरु पार्टी जस्तो हामीले आफ्नो स्वार्थका लागि जनता मार्ने काम गर्दैनौ । तर एउटा यस्तो समय आउँछ त्यो बेला यी विदेशी दलालले कारवाही पाउँछन् । अहिले नै उनीहरुको बुद्धि विर्काे उघारे राम्रो होला । शिव सेना नेपाल आज रगतको आँशु बगाएर बसेको छ । संविधानका नाममा नेपालीको पहिचान मेटिदैछ, हामी सहेर बसेका छौ । राष्ट्र विदेशीको इसारामा चलेको हामीले थाहा पाउँदा पनि चुप लागेर बसेका छौ । जनतालाई लडाई रहेका छन् तर पनि हामी चुप लागेर बसेका छौ । कति दिन अब रगतको आँशु बगाउने र चुप लागेर बस्ने ? अव चुप लागेर हामी बस्दैनौ, दलालहरुलाई कारवाही गरेरै छाड्छौ ।
कसरी दलहरु दलाल भए के प्रमाण छ ?
प्रमाण छ, जो हरेक नेपालीलाई थाहा भइसकेको छ । राजनीतिक दलका नेताहरु नेता होइनन् दलाल हुन् । विदेशीहरुको केही पैसामा उनीहरु बिक्रि भइसेका छन् । केही देशका केही ब्यक्तिबाट रकम खाएर उनीहरुले देश र नेपालीको पहिचान बेचिरहेको छन् । उनीहरुलाई एउटा कुरा थाहा रहेनछ, नेपालमा नेपाली आमालाई माया गर्ने धेरै छन् । जुन दिन नेपाली आमालाई माया गर्ने सपुतहरु आउँछन् त्यो दिन विदेशीको पैसा पचाउनु त परको कुरा उनीहरुले आफ्नो दाहसंस्कारको नशिव पनि पाउने छैनन् ।
तपाईहरुले जति भनेपनि धर्मनिरपेक्षता शब्द त संविधानबाट नहट्ने भयो ?
संविधान बन्ने नवन्ने कुरा हाम्रो महत्वको कुरा होइन । महत्वको कुरा त नेपालीको पहिचान बच्यो या बचेन भन्ने हो । हिन्दुराष्ट्र विनाको संविधान आएमा शिवसेना नेपालले टिक्न दिँदैन । हिन्दु राष्ट्र चाहने ९० प्रतिसतले सडकबाट आफ्नो संविधान लेख्छन् । अर्काे कुरा हामीलाई अब ज्यानको माया पनि छैन । जसले ज्यानको माया गर्छ उसलाई मर्नको डर हुन्छ । शिवसेना नेपालले मृत्यु जितिसकेको छ । मृत्युसँग डर छैन । यसको आबास केही समयपछि राजनीतिक दलका दलालहरुले थाहा पाउनेछन् ।
तपाइहरुको संगठन कति ठुलो छ र ?
हाम्रो संगठन कति ठुलो छ भन्ने कुरा निकट भविश्यमै थाहा हुन्छ । नेपालमा मात्र हैन हाम्रा शाखाहरु विदेशमा पनि छन् । कतार, अस्टेलिया, अमेरिका केही दिनअघि भारतमा पनि विस्तार गरेका छौँ । नेपालीको पहिचान हिन्दुराष्ट बनाउन विदेशबाट पनि कम्मर कसीसकेको अवस्था छ ।
केही दलका नेताहरुले देश टुक्राउने अभिब्यक्ति दिइरहेका छन नी ?
मैले पनि मिडिया मार्फत थाहा पाएँ । नेपाली कांग्रेस र मधेशबादी दलका केही विदेशी दलालहरुले यस्तो भनेको थाहा पायौै । देश ट्क्राउने अभिब्यक्ति दिनेलाई तत्काल कारवाही गर्नु पर्दछ । उनीहरुलाई अहिले सडकमा जनताका अगाडी कारवाही गरिएन भने भोली हामी सडकमै उनीहरुलाई फाँसी दिन्छौ । नेपाली दाजुभाईहरुमा फाटो ल्याउने काम भइरहेको छ । दाजुभाइहरुलाई आपसमा भिडाउनेलाई तत्काल जनताले चिन्न जरुरी छ । उनीहरुले जुन ठाउँमा देश ट्ुक्राउने अभिब्यक्ति दिन्छन् सोही ठाउँमा फाँसीसम्मको सजाय दिन शिवसेना नेपाल अब तयार छ । हामीलाई जनताको साथ रहनेछ । हरेक दलभित्र दलाल छन् । कोही युरोयिनको दलाल छन् । कोही नजिकका छिमेकी देशका दलाल छन् । राज्य नै दलाल छ । यस्तो बेला देश बचाउनु हाम्रो कर्तब्य हो । जनता सचेत हुन जरुरी छ ।
yeskathmandu भिडियो हेर्न तलको बाकस थिच्नुहोस